Iwo akabatanidzwa uye akamonyorwazve kudzokorora mazwi emamwe mapurojekiti | Linux Vakapindwa muropa
Kufumura maAcronyms emazita eakavhurika sosi mapurojekiti
Wese munhu anoziva chiri chirongwa cheGNU, iyo KDE nharaunda, iyo Hurd kernel, ... asi isu takamira chaizvo kuti tifunge nezve zvinoreva mazita acho? Neichi chinyorwa ini handireve kutuka mapurojekiti aya, nekuti iwo makuru uye hapana anopokana nehunhu hwavo, asi pamwe mazita haaite ruramisiro kune izvo zvaari kunyatsomiririra.
Isu tese tinoziva uko chirevo che GNUSekuziva kwako, chidimbu chinodzokororwa chinoreva kuti "GNU haisi Unix". Sekuona kwedu, iri inodzokororwa kubvira GNU ichionekazve mune dudziro. Pfungwa iyi yaive yekuratidza kuti kunyangwe yaive chirongwa chekugadzira iyo Unix-senge inoshanda sisitimu asi isina kuve yakanyoreswa Unix.
Parizvino zvinoita kunge zvakajairika, asi zvakadii Hurd... iri zita rekudzokorora hapana kwarinowanikwa. Hurd ndicho chidimbu che "Hird yeUnix-Kutsiva Daemoni" uye Hird zvakare chirevo che "Hurd Nzvimbo Dzinomiririra Kudzika". Chizere chidhori chemazwi echiRussia uye mazita. GNU Yakakuvara Yaitarisirwa kuve kernel yainge isipo kubva kuGNU chirongwa, asi kana iwe ukaigadzira yese pamwe chete une "GNU haisi Unix Hird yeUnix-Inotsiva maDhemoni kubva kuHurd yeInternet Inomiririra Kudzika". Zvese zvinokuvadza ...
Mamwe mapurojekiti akaita KDE ivo vanopawo chimwe chinhu chekutaura nezvacho. Pamwechete, KDE yaive chidimbu che "Kool Desktop Nzvimbo", asi mumwe munhu muchirongwa haana kufarira pfungwa yeiyo "Kool" uye pakupedzisira yakava "K Desktop Nzvimbo" kana "K Desktop Nzvimbo", sezvazviri inozivikanwa nhasi. zuva. Mumwe munhu akatora "kutsva" kubva kuchirongwa nekurova kwepeni uye nekutenda kunaka kwavakaita ... nekuti Nyoro yakanyorwa naK yaisave yakanakira chirongwa chakakomba uye chakakosha kudaro.
Mamwe mashoko - GNU Hurd 0.5: iyo nyowani vhezheni yemahara kernel
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kufumura maAcronyms emazita eakavhurika sosi mapurojekiti
Microsoft Office yeLinux: inogona kunge yave pedyo
Chepamusoro: yakanakisa yemahara software yeLinux